बच्चालाई कति समयसम्म स्तनपान गराउने ? | Samacharpati
प्रकाशित मिति: 2076 भाद्र 19 बिहिबार(September 5, 2019) 11:39 AM बजे Posted By:Robart Ghimire
एक महिला जब आमा बन्छिन्, उनले संसारको सम्पूर्ण खुशी पाएको अनुभव गर्छिन् । आफ्नो बच्चालाई जब उनले छातिमा टाँसेर स्तनपान गराउँछिन्, त्यो क्षण उनको जीवनको अति नै महत्वपूर्ण क्षण बन्छ ।
Tags: आमा र बच्चा, बच्चा, वालिङमा स्तनपान कक्ष स्थापना, स्तनपान
बालबालिकामाथि हुने अपराधि क्रियाकलाप रोक्न, यसरि सिकाउनुहोस्
जान्नुहोस् ! बुधबारबारको दिन यी भगवानको पूजा